Arrears ukuxhasa yerente a rhoqo radio - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Abo abazali abakhoyo obliged ukuhlawula alimony kwi-umntwana, kodwa ngesizathu esithile baya ukuba neentloni kude zabo, izibophelelo, ingaba obliged ukuba reimburse i-arrears kwi-arrearsIqela oko kukuthi wagunyazisa ukufumana umntwana inkxaso phambi reaching kweminyaka ishumi elinesibhozo unelungelo isicelo enkundleni kuba imali ka-alimony xa umntu obliged ukuhlawula alimony evades intlawulo. Phambi kokwenza isigqibo malunga imali ka-alimony, inkundla unelungelo ukwenza ingxelo ngendlela eyiyo isigqibo malunga imali ka-alimony. Kwilixa xa amaqela yayingavumelani kwi intlawulo, kwaye kanjalo xa payer evades intlawulo, ngoko imali ka-alimony kwenzeka ngokuthi inkundla ngokwamkela isicelo abachopheli-mandla. Arrears kuba elidlulileyo inkxaso uya kuba levied kwi isiseko writ ka-uphumezo okanye isivumelwano ngokuhlawula alimony kwisithuba seminyaka emithathu, apho preceded le ntetho a notarial isiqinisekiso okanye writ ka-uphumezo kwi umntwana inkxaso oko kukuthi ngokulawulwa imali. Ukuba bayagwetywa retained kwi isiseko a notarial sivumelwano okanye writ ka-uphumezo ngokuhlawula alimony wawungenzelwanga ngenxa umntu olilungu obliged ukuhlawula, alimony yindlela yesebe eqokelelweyo kwi epheleleyo kuba lonke ixesha ixesha. Ukongeza, ezikhoyo ityala kuba isondlo ngu esekwe bailiff kwi isiseko ixabiso lazo, ukuba baya kuba sele kumiselwe ngumthetho kwesi sivumelwano okanye inkundla.
Isixa-mali alimony izimisele kwi isiseko earnings okanye nayiphi na enye ingeniso umntu lowo kufuneka ahlawule ngexesha ixesha apho intlawulo wawungenzelwanga.
Ukuba, ngelo xesha, umzali ukubhatala alimony akazange umsebenzi, ngoko ke omnye MROT, elamiselwa kwi-isirashiya ngexesha ngelo xesha, withheld evela kuye. Ukuba oku significantly undermines i-imathiriyali kakuhle-ntle omnye zabazali, ngoko ke umzali abantliziyo umdla ngala violated angafaka isicelo kwi-matyala abasemagunyeni ukuba ulungise ityala ukwisikhundla isixa-mali. Kwi-kubekho isivumelwano ngokuhlawula alimony, kwaye xa umntu obliged ukuhlawula alimony sele yokudada earnings okanye enye ingeniso, okanye ingaba akukho earnings okanye enye ingeniso kwaphela, inkundla unelungelo ukuseka isixa esithile isondlo ukuba uhlawulwa nyanga nganye.
I-magnitude kubo lusekiwe, proceeding ukususela kunokwenzeka kwanokulondolozwa habitual esezantsi ye ophilayo kwaye mali imeko macala.
Kwimeko apho ukuba kunye ngamnye umzali ingaba abantwana, vertical, isixa-mali imali yesebe eqokelelweyo abaxhasayo le ngaphantsi kakuhle-ngaphandle. Ukusuka ngentla, kulandela ukuba kukho noa ezithile isixa-mali alimony, kwaye kubalulekile esekwe inkundla ukukhusela ethile imathiriyali inqanaba umntwana ke ubomi. Ukugqiba-mali imeko, inkundla luthathela ingqalelo zonke ezikhoyo umthombo wengeniso Ukongeza, kufuneka kuqatshelwe ukuba alimony ukwisikhundla isixa yindlela yesebe eqokelelweyo kuphela ukulandelelana yeenkqubo. Alimony ufumana imali enye ngabazali phambi komntwana attainment ka-uninzi I-arrears kwi-arrears emva ishumi elinesibhozo leminyaka inako kuphela recovered kwi isiseko oluphezulu amaxwebhu esikhutshwe yinkundla jikelele kwimimandla ephantsi kolawulo lwesixeko, kwemida ixesha apho akusebenzi zingaphezu iminyaka emithathu. I-imali ka-alimony kuba ngeli xesha kuthatha indawo kwi qho ngonyaka ka-matyala okanye oluphezulu ukuze kwisithuba seminyaka emithathu ongaphambi ntetho ka-komphathiswa wephondo uxwebhu.
Kina Bakgrund Kontroller, - Kina Kriminella Civil Domstol Records Sök